Ukugaya kwe-Anaerobic: Isixazululo Sokuphambukisa Ukudla Okumoshakele - Isikhungo se-EcoTechnology
Ukugaya kwe-Anaerobic: Isixazululo Sokuphambukisa Ukudla Okonakele
Kungani Ukudla Okudliwayo Kuyinkinga?
Ngokuvumelana ne UMnyango Wezolimo wase-US, 30-40% yokudla eMelika kumoshwa. Ngo-2017 kuphela, cishe Kwenziwa amathani ayizigidi ezingama-41 kadoti wokudla futhi kuphela u-6.3% waleyo doti owaphambukiswa ezindaweni zokulahla imfucumfucu nasezishisweni zokwenza umquba. Ukudla okumoshiwe nakho kukhombisa ukwabiwa okungafanele kwezinsizakusebenza. Uma sichitha ukudla, sisaphaza nezinsiza zezolimo. Isibonelo, ukudla okusaphazekile kugcina kudle cishe ikota yokuphakelwa kwamanzi ngendlela yokudla okungadliwe okulingana cishe Amanzi asetshenzisiwe angama- $ 172 billion. Ngeza kulokhu isikhathi, amandla, izinto zokubasa ezimbiwa phansi, amakhemikhali, nezinye izinsizakusebenza ezidingekayo ukuze sikhule futhi sikhiqize ukudla kwethu futhi isilinganiso sangempela somthelela wemfucuza yokudla sicaca ngokwengeziwe.
Lokhu kwabiwa okungafanele kwezinsizakusebenza kuyabonakala lapho sicabanga ukuthi yize cishe u-40% wokudla kwethu kumoshwa, Umuntu oyedwa kwabangu-1 baseMelika akanakho ukudlaivula ifayela le-PDF . Esikhundleni sokulahla ukudla kwethu, singakusebenzisa ukondla abantu noma izilwane ezilambile. UMnyango Wezolimo wase-US ilinganisela ukuthi i-11.8% yemindeni yaseMelika ibinenkinga yokuhlinzeka ngokudla okwanele kwawo wonke amalungu ayo ngenxa yokushoda kwezinsizakusebenza ngo-2017. Isigungu Esiphezulu Sokubuyiselwa Kokudla kwe-EPA uhlinzeka ngohlu olubaluleke kakhulu lwezenzo zokunciphisa udoti wokudla kanye nokubhekana nokwabiwa kabi kwezinsizakusebenza. Amazinga aphezulu alesi sikhundla sabaphathi akhombisa izindlela ezinhle kakhulu zokuvimbela nokuphambukisa ukudla okusaphisiwe ngoba kwakha izinzuzo ezinkulu kakhulu emphakathini, emnothweni nakwezemvelo. Njengoba ukwazi ukubona ku-piramidi, ukusetshenziswa okuhle kakhulu kokudla okusaphazwa ukondla abantu abalambile.
Kodwa-ke, ukudla okuchithwayo akuyona nje inkinga yokuchitha izinsiza nokondla abantu abalambile. Kuyinkinga futhi ethinta isimo sezulu sethu. Imfucumfucu yokudla inikela cishe kumaphesenti ayi-8 okuphelele kokukhishwa kwegesi yokushisa emhlabeni jikeleleivula ifayela le-PDF . Konke ukudla okusaphazekile okugcina ngokuhlala endaweni yokulahla udoti kukhiqiza igesi enamandla abamba ukushisa, i-methane, okuyi Inamandla aphindwe izikhathi ezingama-84 kune-carbon dioxide. Ngakho-ke, ngokunciphisa ukudla okusaphazwa, ungaqala nokubhekana nenkinga yokushintsha kwesimo sezulu.
Kuyini ukugaya kwe-Anaerobic?
I-Anaerobic Digestion iyinqubo lapho izinto eziphilayo, njengokungcola kwesilwane noma ukudla okusaphazwa, kwehliswa ngamagciwane lapho kungekho-oxygen. Lokhu kuvame ukwenziwa esitsheni okuthiwa i-digester. Le nqubo idala umanyolo ongasetshenziselwa ukulima kanye nama-biogas akhiwe kakhulu yi-methane. Ama-biogas angashiswa ukukhiqiza ugesi nokushisa, noma angacutshungulwa abe ugesi wemvelo ovuselelekayo kanye nezinto zokubasa. Ngokusho kwe- I-ejensi yokuvikela imvelo (i-EPA), ezinye izinhlobo zezinto eziphilayo ziwohloka kalula kunezinye. Izinto ezidiliza kalula zivame ukukhiqiza ama-biogas amaningi. Umdwebo 1 ngezansi kusuka ku- Environmental Protection Agency ibonisa izinto zohlelo lokutakula lwe-biogas.
Umdwebo 1: Ukugaya i-Anaerobic
I-Anaerobic Digestion inikeza indlela eyigugu nensha yokuguqula imfucumfucu endaweni okulahlwa kuyo udoti. Isibonelo esithandekayo somuntu osebenzisa lobu buchwepheshe Barstow's Dairy and Bakery eLongview Farm eHadley, eMassachusetts. Izinkomo zabo zikhiqiza cishe umquba ongamakhilogremu ayikhulu enkomeni ngayinye ngosuku futhi bazelapha ngomshini wokugaya ukudla ukuze kuphehlwe ugesi.
The Uhlelo lweMassachusetts Farm Energy (MFEP), iphrojekthi ehlangene ye- Isikhungo se-EcoTechnology futhi UMnyango Wezemithombo Yezolimo eMassachusetts, inikeza izinsiza ezahlukahlukene emphakathini wokulima ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla nokukhiqiza amandla avuselelekayo agxile ekuletheni amaphrojekthi kusuka kumqondo kuze kube sekuqedeni. Uma uyipulazi eMassachusetts usebenza iphrojekthi yamandla futhi unentshisekelo yokusebenza ne-MFEP, ungabagcwalisa ifomu lesicelo ukuze uthole olunye ulwazi.
Futhi, hlola ukuvela kwethu kwakamuva kusiqephu se-PBS NewsHour, Ngabe laba balimi baseMassachusetts baphendula kanjani umquba nodoti wokudla amandla, ukuze ufunde kabanzi ngama-anaerobic digesters eMassachusetts.
By UBrian Premo|2020-03-27T09:50:55-04:00Januwari 13th, i-2020|Ukushintsha Kwesimo Sezulu, Ukuqukwa komquba, Amandla ePulazi, Ukusingathwa Kokudla, Izindaba, Ukusimama, Ukudonswa Kwezimfucuza|